Puntland iyo Kooxda Cali Khaliif oo niyad jab weyn ka qaaday kulankii labada Madaxweyne | Somaliland.Org
Madaxweynaha Maamul-goboleedka Puntland C/Raxmaan Faroolle oo isna ku sugan imaaraadka carabta ayaa markii laga soo qeyb galin waayay kulankaasi ku sifeeyay mid aan ummadda waxba tarayn.
“Balan gaara ayuu ahaa oo Somaliland iyo Somalia iyagaa lahaa oo waxay ka codsadeen Imaaraadka in ay is tusto sida qoraal yar oo hortayda yaala,”ayuu yidhi Madaxweynaha Puntland oo u waramayay laanta afsoomaaliga ee BBC-da.
Mr. Faroole isagoo hadalkiisa sii watay wuxuu yidhi “Qoraal yar oo aan inaba wax taraynin ayaa ka soo baxay meesha wixii aanu ku jirin horey ayaan u sheegnay inaan taageersanayn inaba aan wax taraynin ayuu ahaa soomaalina waxba u taraynin.”
Sidoo kale, mareegaha Internet-ka ee taabacsan maamul ku sheega kooxda Cali Khaliif Galaydh, ayaa iyaguna niyad jab weyn ka muujiyay kulankan labada dawladood ee Somaliland iyo TFG-da Soomaaliya ay isku hor fadhiisteen iyagoo kala ah laba qaran oo madax-banaan. Waxaanay faafinayeen bogagoodu aflagaadooyin ay u jeedinayeen Somaliland iyo dawladda Somaaliya.
Previous PostWefti Xukuumadda ka tirsan oo gaadhay Ceerigaabo, kana hadlay shir beeleed ka furmaya magaaladaNext PostWasiir Ku xigeenka Amniga ee wasaarada Daakhiliga oo Tababar u xidhay Dambibaadheyaal Boolis ah	Blog